ओलीले प्रचण्डलाई भने– मलाई करोडौँको भाँडाकुँडा के गर्नू ? (भिडियोसहित) « Khabarhub
ओलीले प्रचण्डलाई भने– मलाई करोडौँको भाँडाकुँडा के गर्नू ? (भिडियोसहित)
काठमाडौँ– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले करोडौँ मूल्यका भाँडाकुँडा प्रयोग नगरेको बताएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लगाएको आरोपको खण्डन गर्दै उनले आफूलाई महँगो मूल्यका सामान नै नचाहिने बताएका हुन् ।
प्रचण्डले बालुवाटारमा ओलीले बाहिरबाट ल्याएर करोडौँको महँगा सामान राखेको आरोप लगाएका थिए। तर, ओलीले एमाले सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डको आरोपको खण्डन गर्दै भने,‘प्रचण्डले चितवन गएर के भनेछन् भने मलाई डेढ लाखको खाटमा सुत्यो भनेर उडाउँथे। केपी ओलीले करोडौंको किनेका रहेछन्। मेरो भान्सामा त भाँडाकुँडा पनि आफ्नै हुन्थे। आफ्नै घरबाट लगेको हुन्थे, के को किन्नु सरकारी निवासमा ?’
ओलीले आफूले श्रीमतीले बनाएको एउटा रोटी र दुई गाँस भात खाएर बस्ने गरेको समेत स्मरण गराए। उनले भने, ‘यहाँ प्रधानमन्त्रीको निवासमा सेना बस्छ, सेनाले खानु पर्‍यो होला, खाना पकाउनु पर्‍यो होला। त्यहाँ ग्यास खर्च भयो होला। मेरो श्रीमतीले बनाएको यति खाना खाएर बस्छु म। अनि करोडौंको भाँडाकुँडा चाहिँ के गर्नु ? एउटा रोटी र दुई गाँस भात खाएर बस्छु। अनि करोडौँको भाँडाकुँडा। सुनका भाँडामा पकाउनु र आल्मुनियमको भाँडामा बनाउनुको कुनै फरक छैन।’
शुक्रवार चितवनमा पुगेर प्रचण्डले ओलीले आफूले बालुवाटार छाड्नै नपर्ने जस्तो गरेर करोडौंको भाँडाकुँडा किनेको आरोप लगाएका थिए।
प्रकाशित मिति : १३ कार्तिक २०७८, शनिबार ६ : २९ बजे
बालेनले कटाए २५ हजार मत: केशव र सिर्जना भन्दा दोब्बर मत
काठामडौं– स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका बालेन साहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा २५
रामपुर– तिनाउ गाउँपालिका–३ स्थित तिनाउ खोलामा फोटो खिच्ने क्रममा सिद्धार्थ
वीरगञ्ज महानगरको मेयरमा गठबन्धनका उम्मेदवार राजेशमान सिंह नै अगाडि
काठमाडौं- पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पछिल्लो मतगणनाअनुसार मेयर पदमा सत्ता गठबन्धनका